मुटुको ख्याल कसरी गर्ने ? जानी राखौं -
मुटुको ख्याल कसरी गर्ने ? जानी राखौं
काठमाडौ। हामीले स्वस्थ्य रहनका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । शरीरलाई आवश्यक क्यालोरि मिलाएर खाएको खण्डमा अनेक खालको रोगका समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसकालागि खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
कुखुराको मासु खानुहुन्छ होसियार ! भित्रिए म’रेका कुखुरा
भारतमा नियन्त्रणमा नआएसम्म नेपालमा कोरोना घट्दैन, ९० हजार संक्रमित हुन्छन्
घनाबस्तीमा कोरोना भाइरस फैलदैछ, सचेत रहौँ
“काठमाडौं बस्ने मानिसले नै सही तरिकाले मास्क लगाउन जानेनन्”
सेनिटाईजरको धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ यी १० कारण बन्न सक्छ खतरा
कोभिड-१९ सङ्क्रमण हुनबाट कसरी जोगिने र लक्षण देखिए के गर्ने सचित्र हेर्नुहोस
जुम्लामा छ महिने बालक पनि सङ्क्रमित
कोरोना विरुद्धको खोपकाे परीक्षण सफल, पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने